Daawo Video: Xasan Shiikh oo Kismaayo tegay iyo Axmed Madoobe oo ereyo cajiib ah ku soo dhoweeyey - Caasimada Online
Home Warar Daawo Video: Xasan Shiikh oo Kismaayo tegay iyo Axmed Madoobe oo ereyo...
Daawo Video: Xasan Shiikh oo Kismaayo tegay iyo Axmed Madoobe oo ereyo cajiib ah ku soo dhoweeyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo wafti la socda, ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland.
Wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyey madaxweynaha Jubaland, madaxweyne ku xigeenka, iyo dadweyne fara badan.
Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Madoobe ayaa erayadii soo dhowayntiisa waxaa ka mid ahaa “ku Soo dhowow Mudane mirihii aad beertay iyo maamulkii aad dhistay, Sharaf ayey inoo tahay adigoo asaasihii (founder) maamulkaan ah inaad noo nasoo booqato annaguna aan ku soo dhoweyno”
Safarka madaxweyne Xasan Sheekh uu ee Kismaayo ayaa la sheegay in uu bilaaw u yahay safari kale uu ku tegi doono xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira.
Xassan Sheekh iyo dhammaan xubnaha mucaardka ah waxa ay wal wal ka qabaan saameynta xoogeysaneysa ee ay Nabad iyo Nolol ku yeelaneyso maamulada taas oo caqabad ku ah hankooda siyaasadeed.
Haddii madax maamul goboleedyada badankood la beddelo, oo ay yimaadaan kuwa raacsan dowladda, sida HirShabelle iyo Koonfur Galbeed, waxay taas saameyn kartaa doorashada 2021, waayo waxaa xildhibaanada soo baxaya ay noqon karaan kuwa raacsan dowladda hadda.
Haddii ay taas ay dhacdo, waxaad aad u yaraaneysa rajada uu Xasan Sheekh dib ugu soo laaban karo hogaanka dalka, waana taas sababta uu safaradan ugu bixinayo maamul goboleedyada, si uu uga hortago.